အိပ် မက် အ ကြောင်း….(၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အိပ် မက် အ ကြောင်း….(၄)
အိပ် မက် အ ကြောင်း….(၄)
Posted by aye.kk on Jul 4, 2012 in Copy/Paste |4comments
၀ါ သ နာ အ ရ ၊ အိပ် မက် များ အ ကြောင်း ကို ၊ စိတ် ၀င် စား ပါ သည် ။
အိပ် မက် ၏ အ တိတ် န မိတ် များ အား ၊ ကောက် ယူ ရ သည် ကို ငယ် စဉ် က လေး ဘ ၀ ၊ အ ရွယ် ထဲ က ပင် လေ့ လာ လိုက် စား ခဲ့ ပါ သည် ။ ယ ခု စာ ဖတ် သူ တို့ အား ၊ ကျွန် မ ဖတ် ထား ဘူး သည့် ၊ မ ဟာ သု ပိ န ဒီ ပ နီ ကျမ်း ၊ အိပ် မက် အ ကျယ် ၊ စာ မျက် နှာ (၁၅၂-၁၅၄)ထိ တွင် ပါ ရှိ သော ၊ စ လေ င ခွေး အိပ် မက် တော် အ ကြောင်း အား ၊ အောက် ပါ အ တိုင်း ဖော် ပြ လိုက် ပါ သည်။
“စ လေ င ခွေး အိပ် မက် တော် အ ကြောင်း”
ပု ဂံ ပြည် သ ဃ် ရာဇ် မင်း ။ ခ-ဆ-ပဉ္စာ-ကျိန်း ငါး ရာ ခြောံ ဆယ် ကို ဖြို ကြွင်း ပ သျှု ဆိ ဒ္ဒ ရ မု နိ ကျိန်း သ က္က ရာဇ် နှစ် ရာ ခြောက် ဆဲ့ ရှစ် ခု နှစ်။ ပု ဂံ ပြည် မှာ ၊ မင်း ဖြစ် တော် မူ သော စ လေ င ခွေး အိပ် မက်
အ ကြောင်း ကား ဤ သို့ တည်း ။
စ လေ အ ရပ် နှိုက် ၊ ငါ့ ခွေး မိ ဘ တို့သည် မ ကုန် ၍ ၊ င ခွေး ကို ။ သူ ကြွယ် တ ယောက် အိမ် မှာ ရောင်း လေ ၏ ။ ထို င ခွေး ၀ါ သ နာ ကား။ ကွမ်း ပန်း ဘ ယောင်း လိမ်း စ ရာ နံ့ သာ ကို ချစ် ၏ ။ ၀တ် ကောင်း စား ကောင်း ကို ချစ် ၏ ။ တ နေ့ သုံး ခါ ဆံ ကို အ မှန် ဘီး သော ဟူ ၏ ။
တ ရံ ရော အ ခါ ၊ အ ရှင် သူ ကြွယ် သည်-င ခွေး ကို လှေ ထိုး ထဲ့ လေ ၏ ။ ပု ဂံ သို့ မ ရောံ ခင် ညည့် တွင် င ခွေး သည်။ ချက် က အူ ထွက် ၍ ပု ဂံ မြို့ ကို ပတ် လျှက် နေ သည် ဟု အိပ် မက် မြင် မက် လေ ၏ ။ မိုး သောက် လျှင် ၊ လှေ ထိုး ၍ ဆန် ခဲ့ ၏။ လှေ ထိုး ရာ ၀ယ် ၊ မ နော လင် ပန်း ကို ထိုး မိ ၍၊ ထိုး ၀ါး ငြိ ၍ ပါ လာ ၏။ င ခွေး လည်း မ နော လင် ပန်း ပါ လာ သော အံ ကြောင်း ကို သိ လျှင် ။ ငါ့ အိပ် မက် ဖြစ် ခဲ လှ သည်။ သည် မ နော လင် ပန်း နှင့် ကြေ လေ တော့ မည် ဟူ ၍၊ မ နော လင် ပန်း ကို ထိုး ချ ခဲ့ လေ ၏။
ပု ဂံ သို့ ရောက် သော် င ခွေး သည် မင်း ၏ ဆ ရာ ဖြစ် သော ပု ရော ဟိတ် အိမ်သို့ သွား လေ ၏။ ပုဏ္ဏား မ ရှိ ခိုက် ဖြစ် ၍ ။ ပုဏ္ဏေး မ ကို အ ကြောင်း ပြန် လေ ၏။ ပုဏ္ဏေးမ လည်း ၊ ဘုန်း ကြီး မည်။ အ သက် ရှည် မည် ဟု သာ ဆို လိုက် ၏။ င ခွေး လည်း မှတ် မှတ် ရ ရ မ တတ် ပါ သော ကြောင့် ဆင်း ၍ သွား လေ ၏။ ထို ခ ဏ ၌ ပုဏ္ဏား လာ ၍။ ငါ မ ရှိ သည် နောက် ၊ အ ဘယ် သူ လာ သ နည်း ဟု မ ယား ကို မေး၏။ မ ယား လည်း၊ လု လင် တ ယောံ အိပ် မက် ကို ပြန် သော ကြောင့်။ ငါ သည် ကဲ့ သို့ ဘတ် ပေ သည် ဟု ပြော ၏။ လင် ပုဏ္ဏား လည်း အိပ် မက် ကို ကြား သော်။ ယား ဆံ ထုံး ကို လှီး ၍ ၊ အောက် သို့ ပစ် လိုက် လေ ၏။ ပစ် လိုက် သော ခ ဏ ၌။ ဆံ ထုံး ကို မိုး ကြိုး ပစ် လေ ၏။
ပုဏ္ဏား လည်း အိပ် မက် ပြန် လာ သူ ကို အ လျှင် လိုက် ၍ ခေါ် ရ လေ ၏။ ရောံ လာ လျှင်၊ အ မောင် ကား။ အ ဘယ် ရပ် ၌ နေ သ နည်း။ အ မောင် ကား။ အ ဘယ် သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် နည်း။ အ မောင် မက် သော အိပ် မက် သည် ကား။ အ လွန် ဖြစ် ခဲ လှ သည်။ သီ တင်း သီ လ ကို လည်း ဆောက် တည် ပါ လေ။ မ ကြာ မ တင်၊ ပု ဂံ ပြည် ကို အ စိုး ရ သော မင်း ဖြစ် လ တံ့။ အ မောင် မင်း ဖြစ် သော အ ခါ ၊ ငါ့ ကို မ မေ့ ပါ စေ နှင့် ဟု ဆို လိုက် ၏။ င ခွေး လည်း ကုန် စည် အ ရောင်း အ ၀ယ် ပြီး လျှင်။ စ လေသို့ စုန် လေ ၏။ အ ရှင် သူ ကြွယ် လည်း င ခွေး ကို လွန် စွာ ညှင်း ပန်း လျက် ။ ပူ ပြင်း စွာ စေ ပါး လေ ၏။
တ ရံ ရော အ ခါ။ င ခွေး သည် မ ခံ နိုင် ၍။ ထွက် သွား ပြီး လျှင်။ တန် နက် မင်း မှာ ၀င် ၍ ခ စား လေ ၏။ မင်း ကြီး လည်း လု လင် ၏ အ သွင် အ ပြင် ကို မြင် သော်၊ သ နား တော် မူ သည် ဖြစ် ၍ မြင်း ခံ ခန့် တော် မူ ၏။
တန် နက် မင်း လည်း-မောင်း မ ငယ် တ ယောက် နှင့်-မြင်း တင်း ကုတ် သို့ နေ့ ည မ ပြတ် လာ တော် မူ ၏။ တ နေ့ သ ၌ တန် နက် မင်း သည် မြင်း ခံ ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ ဤ သို့ မိန့် တော် မူ ၏။ အ ချင်း မြင်း ခံ။ ထို မြင်း ချေး ကို ဝေး စွာ သော တွင်း နှိုက် ထည့် ပြီး မှ။ သွေ့ ရာ က စ ၍ မီး ထဉ့်၊ နောက် ထဉ့် သော မြင်း ချေး လဉ်း မီး ၏ အ ရှိန် ဖြင့် သွေ့ နှင့် ၍ လောင် နှင့် စေ ဟူ ၍ မိန့် တော် မူ ၏။ မြင်း ခံ တော် လည်း မင်း ကြီး ဆို တိုင်း ပြု လေ ၏။ အ ခါ တ ပါး သော နေ့ ၌-မင်း ကြီး နှင့် ပါ လာ သော မောင်း မ ငယ် နှင့် မြင်း ခံ စ ကား ၀င် ၍ ။ မင်း ကြီး ကို မြင်း ချေး တွင်း ၀ယ် တွန်း ချ ဘိ ၏။ မြင်း ခံ လည်း မိ ဘု ရား မောင်း မ တို့ ကို အ လို သို့ ပါ အောင် ခြိမ်း ခြောက် ၍ မင်း ပြု လေ ၏။
င ခွေး ကား၊ ဘု ရား ရှင် လက် ထက် ။ ဘု ရား ရှင် ကို နေ မ ပူ စေ ရ အောင်၊ အင် ဘက် သုံး ချပ် ကာ ၍ ပေး သော တောင် စောင့် ဘီ လူး ကို။ ဤ ပြည် တွင်၊ မင်း သုံး ကြိမ် ဖြစ် လ တံ့ ဟူ ၍ ဗျာ ဒိတ် ရ သော သူ ဖြစ် ၍။ ဘုန်း တန် ခိုး အာ နု ဘော် ကြီး ၏။ ဘီ လူး အ ဖြစ် မှ စု တေ လာ သ သူ ဖြစ် ၍ လည်း အ မျက် စောင်း မာန် ကြီး ၏။ အ စား ကြူး ၏၊ မူး မတ် ဗိုလ် ပါ တို့ လည်း ကြောက် ရွံ့ ခြင်း ပြင်း ကုန် သည် ဖြစ် ၍ ခ စား ရ လေ ကုန် ၏။
ထို မင်း ကား စ လေ အ ရပ် နှိုက် ၊ သ ခင် အိမ် တွင် စေ ပါ ခံ နေ ရ စဉ်။ သ ခင် ဖြစ် သူ ညှင်း ပန်း ဘူး သည် ကို အ ငြိုး ထား ၍ ၊ မင်း ဖြစ် လျှင် သ ခင် ကို သတ် လေ သည်။ သ ခင် နှင့် အ သွင် အ ပြင် တူ သ သူ တို့ ကို လည်း ဘမ်း ၍ ရ လျှင်။ ရေ ကန် ၀ယ် ချ စေ ပြီး သော်။ ၀က် ဟူ ၍ ဆင် ထက် က လှံ နှင့် ထိုး သော ဟူ ၏။ ယ ခု လော က မှာ လည်း ထို အ ကြောင်း ကို ထောက် ၍။ မိ မိ ထံ စေ ပါ ခံ ရ သော သူ ကို ပင် ဖြစ် စေ။ ငါ သ ခင် ။ ငါ အ ရှင် ။ ငါ ပြု ပိုင် သူ ။ ငါ ပြော နိုင် သော အ ရာ ဟု ။ ပ မာ မ ထား ။ မ လေး မ စား ။ တ ရား အ တိုင်း ထက် လွန် ၍။ သူ တ ဘက် သား ၊ ငြီး တွား ငြို ငြင်။ ပင် ပန်း ကျဉ်း မြောင်း အောင် မ ပြု ရာ။ ဘုန်း ကြီး ဘုန်း မဲ့။ သ တ္တ ၀ါ တို့ ၏ ကံ အ လှည့် ကို မ သိ နိုင်။ ဤ သူ ကား ဘုန်း ကြီး မည်။ ဤ သူ ကား ဘုန်း ငယ် မည် စ သည် မျိုး အား ဖြင့် သော် ၎င်း။ စည်း စိမ် အ ၀ှန် အ ၀ှာ အား ဖြင့် သော် ၎င်း။ ပိုင်း ခြား ခြင်း ငှာ တတ် ကောင်း သည် မ ဟုတ်။ ထို့ ကြောင့် ခပ် သိမ်း သော သူ တိုင်း ပင်။ သ တိ ပြု ထိုက် လှ အပ် သည်။ ထို စ လေ င ခွေး ကား။ နန်း စည်း စိမ် နှစ် ဆဲ့ ငါး နှစ် တိုင် တိုင် စိုး စံ ရ ၏။
ဤ သို့ င ခွေး မင်း ဖြစ် တော် မူ မည် အ ချိန် နည်း တွင်။ ထို သို့ဖြစ် ရ အံ့ သော အ ကြောင်း နှင့် လျှော် သော န မိတ် အိပ် မက် များ ကို မြင် မက် ရ သည်။ မြင် မက် သည် အ တိုင်း လည်း ၊ မင်း အ ဖြစ် သို့ ရောက် လေ သည်။ ဤ သည် ကို ထောက် ၍ ။ ယ ခု လော က မှာ လည်း ။ မင်း သူ ဌေး သူ ဆင်း ရဲ အ မျိုး အ စား အ လိုက် ။ ဘုန်း ကြက် သ ရေ။ ဖြီး ထွေ ရ တ နာ ။ ဆိုက် လာ တော့ မည် ဖြစ် လျှင် ။ ထို ဖြစ် ရ အံ့ သော အ ခြေ နှင့် လျှော် သော န မိတ် အိပ် မက် ကောင်း များ ကို မြင် မက် တတ် ကြောင်း။ မြင် မက် သည် အ တိုင်း လည်း အ မှန် ဖြစ် သား ရာ သ တည်း ။
ထို အိပ် မက် များ မှာ စိတ် ၀င် စား ဘွယ် ရာ ဖြစ် ၍ ၊ ဂေ ဇက် ရွာ စာ ပေ မိတ် ဆွေ များ အား ၊ သိ ရှိ နိုင် ပါ ရန် မူ ရင်း ကျမ်း ပါ အ တိုင်း မှ ပြန် လည် ကူး ယူ ဖော် ပြ ခြင်း သာ လျှင် ဖြစ် ပါ သည် ။။
အိမ်မက်တွေဟာ လူ့ ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ… ခုလို ထူးခြားတဲ့ အိမ်မက်မျိုးဟာ လူ့ ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင်ပါတယ်..ဒါကြောင့် အိမ်မက်များကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားကြပါနဲ့ ..ခုလို အိမ်မက် များ အကြောင်း ကို ဗဟုသုတ အဖြစ် တင်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ….
Dreams must change into positive feelings after having negative thoughts in dreams!
ငကြောင် မင်းဖြစ်ရင် ကြေးမုံဂျီးကိုဖမ်းပီး ဧရာဝတီမြစ်ကို အလျားလိုက် ကူးခိုင်းမယ်၊ သဂျီးကို နေ့ညမပျက် ပိဋကတ်သုံးပုံ အလွတ်ကျက်ခိုင်းမယ်၊ ပုရ်ှလေးကို အထက်မြန်မာပြည် မဟေသီခန့်မယ်၊ မိုးစက်လေးကို အောက်မြန်မာပြည်ဒေဝီ အရာပေးမယ်၊ စီတုံးဆိုတဲ့ သတ္တဝါကို အယောင်ဆောင်မှုနဲ့ ဖမ်းချုပ်အရေးယူမယ်……။
အမအေးကေကေရဲ့စာလေးဖတ်မိပြီး ပို့တစ်ခု ရေးတင်ဖြစ်လိုက်ပါသည်။ အမအား နောက်ပြောင်လိုခြင်းမဟုတ်ပဲ စာဖတ်သူများ ပြုံးပျော်စေခြင်းငှာ ရူးကြောင်ကြောင်ရေးသားလိုက်ကြောင်း တောင်းပန်အပ်တယ်ခင်ဗျာ။